Calaamadaha Archives - Somali Kidshealth
Carruurtu way ciyaarayaan, way boodboodayaan, way ordayaan. Waxay tijaabinayaan wax kasta ama shay kasta oo ay nolosha kula kulmaan. Markaa waxaa soo gaari kara shilal aysan qiyaasayn. Sidoo kale, waxay isku gaysan karaan dhaawacyo. Meelaha ugu khatarsan oo dhaawacuadu ka soo gaari karaan waxaa ka mid ah madaxa oo jug ama dhaawac ka gaari karo. Halkaan hadda waxaan doonaynaa inaan waalidiinta tusno hababka ugu wanaagsan ee loo maareeyo dhaawacyada ilmaha madaxa ka soo gaara. Tilmaanta ugu horaysaa waa haddii cunugaaga jug ama dhaawac madaxa ka gaaray ula carar isbitaalka iyo dhaqtarka. Dhaawacyada madaxa carruurta ka soo gaara waxaa loo kala saaraa labo nooc : Dhaawac banaanka ah: oo ah dhaawac fudud oo madaxa gaara, inta badan jugtu ma gaarto maskaxda. Waxaa imaa...
Jamaal wuxuu dareemayaa inuu musqusha tago si uu u soo saxaroodo, waayo muddo 4 beri ah ma saxaroon. Wuxuu galay musqushooda, Laakiin saxankii musqusha markii uu ku fariistay ayuu sameeyay docosho badan iyo inuu saxarada xoog isaga soo saaro. Cabaar markuu xarbiyay ayuu soo tuuray dhawr qurub oo adag oo qalalan. Jamaal dabadeed saxaradii ayuu iska mayray, surweelkiisii xirtay dabadeedna gacmaha saabuun ku mayrtay. Weli wuxuu dareemayaa caddaadis in saxaradii aysan ka soo dhamaan. Maxay tahay sababtu? Haa. Wuxuu qabaa calool-qalayl ama saxaradiisii oo adkaatay. Waa maxay calool-qalayl ama constipation Callool-qalaylka carruurtu waa marka ilmuhu muddo caadiyan maalmo ah uusan saxaroon ama haddii uu saxaroodaba ay ka timaado saxaro adag oo si xanuun leh uga soo baxda malawadka. In...
Marka qofka caadiga ah ama ilmaha yar ay ku yaraato oksijiinta uu jirku u baahan yahay ayaa la dareemaa neef-qabatinka, oo ah in naftii la harjadayso inay hesho hawo oksijiin ah oo la neefsado. Sanka oo cabur owgiis xirma iyo jimicsi badan waxay keenaan in cunugu neefta boobo, laakiin haddii ay muuqato in ilmuhu neefta si xun u jiidayo waxay tilmaamaysaa dhibaato caafimaad oo xun inay jirto. Maxaa keeni kara neef-qabatinka Waxyaalaha ama cuduradda keena neef-qabatinka carruurta waa badan yihiin, laakiin cudurka ugu saamaynta badan ee keena neef-qabatinka ayaa ah Neefta. Neeftu waxay timaadaa marka tuubooyinka neef-mareenka ay xasaasiyad awgeed ciriiri noqdaan amaba ku dhawaadaan inay xirmaan. Waxaa markaa dhib ilmaha ku noqonaysa inay neefta jiidaan. Cuduradda kale ee sababa n...
Matagu ama hunqaacadu waa calaamad caam ah oo ay carruurtu leedahay. Matagu wuxuu yimaadaa marka cuntada iyo cabitaanka ku jira caloosha ilmaha banaanka si xoog ah uga soo baxaan oo ka boodaan afka iyo sanka. Matagu waa hab ama dariiqo jirku isaga soo saaro waxyaalo ama jeermisyo dhib ku ah jirka. Mararka qaarkood marka carruurta si saa'id ah loo quudiyo way iska soo saaraan cuntada ama cabitaanka dheeraadka ku ah calooshooda yar. Matagu wuxuu u horseedi karaa ilmaha khatar wayn, mar haddii dheecaan,biyo iyo macdano badan sida cusbada oo kale ay jirka banaanka uga baxayaan. Marka jirku lumiyo dheecaanka iyo macdanahaas waxaa la yiraahdaa Fuuq-bax ama dehydration. Marka uu yimaado fuuq-bax, ilmuhu wuxuu khatar ugu jiraa in xitaa wadnahu istaago oo mark...
Apr112013 by admin2 Comments
Shubanka laatiinka waxaa lagu yiraahdaa Diarrhea oo ka yimid eray Giriig ah oo macnihiisu yahay Dareerid (Dia="flow" iyo -rrhea ="through"). Macnaha waxa weeye waa marka qofku dhigo saxaro jilicsan oo biyo u badan marar badan oo is-xiga. Shubanka waxaa keena saamayn caabuq ama caabuq la'aan. Sidee baan ku ogaan karaa in cunnugayga uu hayo shuban? Ugu horayn waxaa muhiim ah inaad ogaato xaalada cunnugaaga gaarka u ah. Ilmaha yar-yari aad bay u saxaroodaan - weliba mar walba oo la quudiyo waxaa suuragal ah inay dhigaan saxaro jilicsan - waxaa kaloo taas sii dheer in saxarada jilicsan ee ilmaha yar ku xiran tahay waxa ay hooyadu cuntay iyo haddii ay nuujinaysay. Haddii cunnugaaga mar mar uu shubmo oo dhigo saxaro jilicsan ma jirto wax laga welwelo, laakiin haddii aad k...
Apr102013 by admin1 Comment
Qufacu waa calaamad muujisa in jirro ama caabuq ka jiro habdhiska neef-mareenka ee Carruurta. Qufacu waa darreen xoog leh oo sanbabka, sanka iyo hunguriga cad isaga soo saaraan wax ka kasta oo jirka dhib u keeni kara. Waa calaamad guud ah oo ku caan ah carruurta qabta neefta iyo qaar-jeexa(pneumonia), hargabka iyo wixii la mid ah. Cunnug qaba neef waxaa suuragal ah inuu qufaco si uu isaga soo saaro xabka buuxinaya dhuumaha yar yar ee ciriiriga noqda marka xasaasiyadi timaado. Qaar ka mid ah carruurta qufacu wuxuu noqon karaa calaamada kaliya ee muujisa in cunugu qabo neef. Maadaama qufacu uu yahay difaac dabiici ah oo jirka aadamigu isaga soo saaro jeermis ama xasaasiyad dibada uga timaado, ayaa haddana cunnugu qufacayaa dhib wayn soo gaartaa haddii aan la daawayn. Haddaba si aad u faha...
Ka soo qaad cunnugaagii dugsigii ama iskuulkii buu ka soo noqday isagoo daalan ama xumadi hayso. Hooyadu markiiba gacanteeda ayay ilmaha wajigiisa saartaa bal heerkulka jirka cunnugu inuu koreeyo iyo in kale. Amaba waxaa la isticmaali karaa thermometer si loo ogaado heerka heerkulka jirka. Waxaa la is-waydiiyaa dhowr su'aalood oo kala ah:- Waa maxay Qandho? Qandho waa marka jirka aadamiga uu soo galo organism jeermi ah oo waxyeelo u gaysan kara jirka. Waa jawaab-bixin jirku ka baxsho inuu iska difaaco jeermigaas, oo lagaga hortago kulayl ay maskaxdu amarto in jirka heerkulkiisa kor loo qaado. Sida badan heerkulka caadiga ah jirkeenu waa 37.5C, laakiin marka qandho timaado wuxuu gaaraa ilaa 38.5C-40C. Cilmi-baaris la sameeyay waxay sheegaysaa qaybta maskaxda ah ee kor u qaada ...